Mozambika: Herisetra, hatezerana any Maputo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2010 20:01 GMT
Nifoha tam-pisalasalàna ny renivohitr'i Mozambika, Maputo, io maraina io, taorian'ny korontana omaly izay niteraka fahafatesana maro. (Ny isa notaterin'ny haino aman-jery fototra dia eo anelanelan'ny 4 hatramin'ny 10). Navoakan'ny gazety A Verdade [Ny Marina, pt] tamin'ny Facebook ireo sary mampihorin-koditra ahitàna ireo mpianatra maty voatifitra omaly.
Loharanom-baovao tsara dia tsara hatrany ny vohikala. Ny vohikala “Olon-tsotra mpanao gazety”, amin'ny alalan'ny fitaovam-baovao avy amin'ny besinimaro mba ahazoana ireo tatitra amin'ny simaiso, dia nandrakitra tranga vaovao amin'ilay antsoina hoe “Andro faharoa”, anisan'izany ireo tatitra avy amin'ny tanàna Chokwé, avaratry ny Renivohitra.
Tsy nivoaka ireo gazety hafa sy haino aman-jery lefitra androany, araka ny nomarihan'i Carlos Serra [pt]
Olana amin'ireo gazety roa: “Savana” sy “Canal de Moçambique”, ny voalohany voasakan'ny tsy fahampian'ny taratasy sy ny fahasarotan'ny fivezivezen'ireo kamiaony, ny faharoa navoaka fa tsy afaka notaterina na namidy, sady vitsy ireo mpividy aty an-tanàna ary tsy miasa mandritra ny fotoana voafetra ny vavahadiny [amin'ny aterineto].
Ampiasaina eo ambany fiarovana CC, avy amin'ny mpampiasa Flickr sharonpe
Vao mangiran-dratsy tamin'ny Alakamisy, ny olona tahaka an-dry Sharon Peters no nitatitra an-tserasera fa tsy nisy fiara nifamoivoy ary vitsy mpandeha tongotra eny an-dàlan'i Maputo. Nampiakatra sarin'ireo làlam-poana nalaina avy eny an-tafontrano izy.
Toa miambina ireo làlana ireo miaramila mandritra ny alina, ary ireo manampahefàna dia niezaka ny nitàna ireo làlan-dehibe hisokatra amin'ny maraina, nefa ny mponina dia nitatitra adiady tany amin'ireo tanàna mahantra any an-tsisin'i Maputo. Ary misy ireo tatitra avy amin'ny Twitter momba ny tifitifitra mitsitapitapy toy ny tatitra avy amin'ny mpanao gazety tsy miankina Natstasya Tay
Mirehitr'afo indray ireo kodiarana any Mafalala. Tifitifitra tamin'ny maraina, fisian'ny mpitandro ny filaminana maro. Mahalasa adala ny hikiakan'ny feon'ireo fiara mpitatitra marary.
Mandritra izany, ny Amnesty International dia namoaka fanambaràna miantso ny mpitandro ny filaminana mba tsy hitifitra bala tena izy raha tsy efa fiarovana ain'olombelona ihany.
Androany ireo mponin'i Maputo niandry kabary iray hafa avy amin'ny Filoha Armando Guebuza. Maro ireo tsy afa-po tamin'ny kabary nataony tamin'ny fahitalavitra omaly, toa an'i @BeBe_da_DLimpo izay nanoratra omaly fa “ny Filoha dia tsy mahatakatra ny faharatsian'ny toe-draharaha” ary i @itzDenisse izay nitsikera ny ts fahampian'ny fahatokisan-tena tao amin'ny kabariny [pt]. Horakorahana eny an-dàlana ny antsony ho an'ny #Fialànny Filoha, araka ny taterin'ny blaogy Moçambique para Todos [Mozambika ho an'ny rehetra, pt].
Ny mpiadidy gazety Jeremias Langa dia naneho mazava nyheviny tao amin'ny gazety O País, naverina tao amin'ny blaogy Reflectindo Sobre Moçambique [Mandalina an'i Mozambika, pt]
Ny Lohan'ny Fanjakàna no mpitari-dàlana ny firenena iray, na amin'ny fotoan-tsoa izany na amin'ny fotoan-tsarotra. Izy no feo mampitony sy manome toky raha misy ny disadisa sosialy. Omaly, tsy izany izy. Tsy hainy ny fomba hahatongavana ho amin'izany feo izany. Satria tara loatra vao tonga ny hafany. Izany ehetra izany dia satria omaly ny Filohantsika, amin'ny fotoanan'ny krizy, dia nihaona tamin'ny antoko tany amin'ny lapam-panjakàny. Izay midika fa matoky kokoa ny antoko izy mihoatra noho ny fanjakàna tarihiny, rehefa ny fitadiavana vahaolana ho an'ny firenena no resahana.
Mbola miketrika mafy mandevina sy mandalina ireo fototr'ireo korontana ireo mpitoraka blaogy, izay natosiky ny fiakaran'ny vidim-piainana. Zavatra iray no azo antoka: niteraka fanontaniana lalina momba ny toerana misy ny firenena ara-politika, sosialy ary toe-karena izany.
Etsy an-daniny, raisin'ny maro ho modelim-pandrosoana any Afrika ny firenena. Etsy an-kilany kosa, nandalo fidinan'ny sandam-bola amin'ny faran'ny ambany i Mozambika, miaraka amin'ny politika manome lanja kokoa ny fanafarana entana avy any ivelany toy izay ny fitomboan'ny toe-karena any an-toerana, ka nahatonga olana ara-sosialy lehibe. Araka ny fanehoan-kevitr'i As Vera [pt]:
Mozambika, tahaka ny firenen-kafa eto Afrika dia ahitàna olona miaina anaty fahantràna lalina nefa eo am-pelatànan'ny manampahaizana (“élite”) manana fitaovana politika sy ny ngetroka ny varotra, orinasa ary fanafarana entana avy any ivelany
Saika ireo zavatra ampiasain'i Mozambika rehetra dia nafarana avy any ivelany avokoa, ka mahatonga anao hieritreritra … fa ny firenena niroborobo taloha tamin'ny sakafo sy ny voankazo dia tsy manana na inona na inona intsony ankehitriny.
Tsy manana na inona na inona satria ireo taranaka tavela dia tsy mahalala ny fomba na tsy mahay mihitsy mamboly ny tany … satria tsy voaantoka noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny halatra mihitsy ny vokatry ny namboleny… tsy mety ho an'ny ngetroka ny fahitàn'ny vahoaka fomba hivelomana izay tsy miankina amin-dry zareo [amin'ny ngetroka].
Mozambika dia tontolo feno fanararaotana … eny, fa miaraka amin'ny fahasarotam-piainana avo indrindra. Izay hifaranan'ireo fanararaotana satria voaelingelin'ny tsy fandriampahalemana ny fiainan'ireo te-hanao zavatra.
Mazava ho azy, ny hanoanana, ny fahantràna dia miteraka fitokonana. Ireo lalàna fototra amin'ny fiainan'ny olombelona mihitsy no tafiditra.
Tonga ny alina, mbola mitoetra ihany ny fisalasalàna any Maputo, araka ny soratan'i Bibiana Gomes ao amin'ny blaoginy [pt]
Manoratra ity aho anio 2 Septambra, amin'ny 5ora hariva eo ho eo … dia vao naheno tifitifitra indray aho. Mbola ny nifarana izany, sady tsy fantatra ny fotoana na fomba hiafaràny. Mety hifarana ny tifitifitra, ho faty ny afo, nefa amin'ny firenena mbola itoheran'ny faniriana hiady, mampalahelo fa ny herisetra no toa fomba hampandrenesana, hiantsoana fahafahana. (…)
Eritreretina fa rahampitso dia hiverina amin'ny alonin'y i Maputo, fara faha-ratsiny amin'ny endriny ivelany fotsiny. Nefa aorian'ny korontana, azontsika fantarina ny zavatra an-tsain'ny olona, ny hiaka tofoka sy ny fahafahan'ity fiarah-monina ity hihetsika.
Ity lahatsoratra ity dia niarahana nanoratra tamin'i Sara Moreira.